February 26, 2020 - MM Live News
လမျးကွုံလိုကျလာတဲ့ သားအမိ ၂ ဦးနှငျ့ အမွနျလမျးပျေါက ခွောကျခွားဖှယျရာ တဈညတာ (ဖွဈရပျမှနျ)
ညနေ (၄း၀၀) နာရီ..။ ကိုယ်စီးရမည့် ကား ကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေမိသည်။ စီးရမှာ အတော် ဇိမ်ကျမည့် ကားကြီး…။ ဟုတ်သည်။ အခုနောက်ပိုင်း အထူး express ကားတွေ ပြေးဆွဲလာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို မကြာခဏ ခရီး သွားနေသူများအဖို့ အရမ်း ကို အဆင်ပြေလွန်းသည်။ လေယာဉ် မစီးနိုင်သူများအဖို့ ယခင်က ကုန်းလမ်း အဖြစ် ရထား ကိုသာ အားကိုး အားထား ပြုခဲ့ရမှ ယခုအခါတော့ အဆင်ပြေပြေနဲ့ သွားလာနိုင် ကြပြီ ဖြစ်သည်။ အခုလည်း ရန်ကုန်ကို ခဏတစ်ဖြုတ်လာဖို့ရှိတာကြောင့် ကားဂိတ် ရောက်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ (၄း၀၀) နာရီ ထိုးသည်နှင့် ကားပေါ်ကို ကျွန်တော်တက်လိုက်သည်။ ခရီးသွားဖူးသူတိုင်း သိကြမည်ထင်သည်။ ကိုယ် ဘယ်တူနဲ့အတူ ထိုင်ခုံ […]
ကြောငျးစာကွညျ့တိုကျမှ စာအုပျမြားယူဖတျတဲ့ ကြောငျးသား/သူ ၆ ဦး အငွိုးနဲ့ ရိုကျနှကျအပွဈပေးခံရဟုဆို
မြိတ်မြို့နယ်တွင် ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှစာအုပ်များယူဖတ်တဲ့ ကျောင်းသား/သူ ၆ ဦး ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခံရ (26.2.2020) မြိတ်မြို့နယ်၊ ပသောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပသောင်းကျေးရွာ အ.ထ.က(ခွဲ)တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ဘာသာရပ်ဆရာမတစ်ဦးက ၅ တန်းကျောင်းသား/သူ ၆ ဦးကို ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပသောင်းကျေးရွာ အ.ထ.က(ခွဲ)တွင် ပညာဆည်းပူးနေတဲ့ ပဉ္စမတန်း(B)အခန်းက မကြယ်စင်ဖြိုးပါအဝင် ကျောင်းသူ ၅ ဦးနှင့် ကျောင်းသား ၁ ဦးက ၊ ကျောင်းတွင်းစာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်တွေကိုယူဖတ်တာကြောင့် ဘာသာရပ်ဆရာမဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းက ကလေးတွေကိုရိုက်နှက်မပြစ်ပေးခဲ့တာပါ။ “၈ တန်း နှင့် ၄ တန်း စာမေးပွဲဖြေနေတော့ ၅ တန်းမှာ စာမသင်ဘူး၊ ကလေးတွေက စာကြည့်တိုက်က စာအုပ်တွေယူဖတ်တယ်၊ ဒါကို ဆရာမကကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်။ အရိုက်ခံရတာက ၆ ယောက်လုံးအရိုက်ခံရပေမယ့် မကြယ်စင်ဖြိုးနဲ့တော့ […]
ယနေ့ ညပိုငျးနှငျ့ မနကျဖွနျ နံနကျပိုငျးတှငျ မိုးရှာသှနျးနိုငျပွီး ရုတျတရကျလပွေငျးတိုကျခတျခွငျး လြှပျစီးလကျခွငျး မိုးကွိုးပဈခွငျးမြားဖွဈပျေါလာနိုငျသော ဒသေမြား
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ရက်နေ့ ည နှင့် ၂၇ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဒေသတွေမှာ မိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီး …. လျှပ်စီးလက်ခြင်း မိုးကြိုးပစ်ခြင်း ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်…။ ပင်လယ်ဘူး ဝန်းသို ကောလင်း ဗန်းမောက် အင်းတော် မိုးညှင်း ဘီလူး ဟိုပင် ပင်ဘော မိုးကောင်း ….. နမ္မတီး ဖားကန့် တနိုင်း ကာမိုင်း မြစ်ကြီးနား ဝိုင်းမော် ဆွမ်ပရာဘွမ်ပူတာအိုမချမ်းဘောနောင်မွန်းပန်နန်းဒင်ခေါင်လန်ဖူး ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ် ….။ ပူတာအို နောက်မွန်း ပန်နန်းဒင်ခေါင်လန်ဖူး ဒေသများ မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်…..။26/02/2020 at 7:53pm (MMT) SU SU SAN unicode ၂၀၂၀ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၆ရကျနေ့ ည နှငျ့ ၂၇ရကျနေ့ […]
မနကေ့ သံလှငျမွဈထဲဆငျးသှားတဲ့ (၁၃)နှဈအရှယျကောငျမလေး ပွနျလညျဆယျယူရရှိပါပွီ
မနေ့က သံလွင်မြစ်ထဲဆင်းသွားတဲ့ သီရိမင်္ဂလာမှ (၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး မမြတ်နိုးချစ်ရဲ့ အလောင်း ပြန်လည်ဆယ်ယူရရှိပါပြီ မော်လမြိုင် ဘိုကုန်းရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်း သံလွင်ဈေးအနောက် သံလွင်တံတားမှ 26.2.2020 ရက်နေ့ ညနေ(4:30)အချိန်ခန့်မှာ ပြန်လည် ဆယ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ဘိုဘိုဝင်း RESCUE အဖွဲ့ဝင်တို့မှ လှေသမားများနှင့်အတူ မြစ်ထဲမှ ဆယ်ယူတင်ပေးကာ မော်လမြိုင် RESCUE အဖွဲ့ DB တင်ကားဖြင့် ဆေးရုံကြီး OPD မှတဆင့် ရင်ခွဲရုံသို့အရောက် ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ မော်လမြိုင် RESCUE လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ / 09 784 784 199 / 09 785 785 199 / 09 […]
(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတျဆှတေို့ ခြိနျဆနိုငျရနျ တဈပတျစာ မနောမယဟောစာတမျး
(26.2.2020 to 3.3.2020) မိတ်ဆွေတို့ ချိန်ဆနိုင်ရန် တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် …. (၇) ရက် သား သမီးအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ….။ ဇင်ယော်နီ unicode (26.2.2020 to 3.3.2020) မိတျဆှတေို့ ခြိနျဆနိုငျရနျ တဈပတျစာ မနောမယဟောစာတမျး ဖဖေျောဝါရီလ ၂၆ ရကျနမှေ့ မတျလ ၃ ရကျနအေ့ထိ ကံ ဉာဏျ ဝီရိယ သုံးခကျြလုံးအားကောငျးအောငျ ကွိုးပမျးတျောမူနိုငျကွပါစသေျော …. (၇) ရကျ သား သမီးအားလုံး […]
သားဇောနဲ့ ကြှနျးလှမွို့ကို အရောကျလာခဲ့တဲ့ တောသူမကွီး အမပေုရဲ့ သားပြောကျရှာပုံတျော အဆုံးသတျနိုငျခဲ့ပွီ
မထင်ထားဘူး ကျတော်လုံးဝမထင်ထားဘူးကျတော် ထင်တာက စိုးမင်းအောင် သေပြီ။သေချာပေါက် သေပြီ။ ဘာလို့ဆို စိုးမင်းအောင်ပျောက်တာ နှနှစ်ကျော်ပြီ။ နောက်ပြီး သူက မသန်းစွမ်း အစာရေစာ ငတ်မယ် မသမာသူနဲ့တွေ့မယ်။ဒိထက်ပိုဆိုးနိုင်တာက ဘာမှခိုင်းစားမရတောင် ခွက်တလုံးပေးပြီး တောင်းခိုင်းမယ် ဒါမှမဟုတ် ကလီစာတွေထုတ် ရောင်းကြမယ်။ ခင်များစဉ်းစားကြည့်လေ ဒါ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ငြမ်းချည်တဲ့ကြိုးကြောင့် ကျွန်းလှရောက်လာကြသူများ (သို့မဟုတ်) ကလေးပျောက်ရှာပုံတော် ကို စာဖက်သူ ဖက်ပြီးလောက်ရောက်ပေါ့။ဒီအကြောင်းကို တကျော့ပြန် လေကြောမရှည်လိုပါ။ ကျွန်းလှကနေ အမေပုပြန်သွားတယ်။စိတ်ထောင်တော့ ကိုယ်ကြေနေတဲ့ အမေပု ရွာရောက်တာနဲ့ ဖျားတော့တာပဲလို့ သိရတယ်။တရက်ခြားလောက် ကျတော့်ဆီဖုန်းဆက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း နှုတ်ကမချဘူး။အမေပုတို့ ရောက်လာတုန်းက နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုလို့ မင်းဟာ အမေ့သားလေးဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ မကြာမကြာ ပြောတယ်။ သား အလုပ်များတာ သိပါတယ် သားရယ် အမေတခါတလေး […]
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ အကွောငျး ကောငျးကောငျးသိနိုငျတဲ့ ထငျရှားတဲ့ မှဲ့ (၇)မြိုး အကွောငျး…
အမျိုးသမီးများရဲ့ အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိနိုင်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့ (၇)မျိုး အကြောင်း အပြည့်အစုံ… ဒီလိုပါ ခင်ဗျာ။ မိန်းကလေးတွေမှာ ထင်ရှားတဲ့ မှဲ့(၇)မျိုးရှိတယ်လို့ မှဲ့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ကျမ်းတွေမှာဆိုကြပါတယ်။ အဓိက မှဲ့တွေပေါ့။ အဲဒီ မှဲ့ (၇)မျိုးက ဘာတွေလဲဆိုတော့ …. ရတနာရွှေအိုးလို့ ခေါ်တဲ့မှဲ့ ၊ ရတနာဆီမီးထွန်းဆိုတဲ့ မှဲ့ ၊ မျက်ရည်ခံမှဲ့ရယ် (ဘယ်ဘက်) ၊ မျက်ရည်ခံမှဲ့ကြီး (ညာရယ်) ၊ နှုတ်တဆိတ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ ၊ ရွှေပိတုန်းစုပ်ဆိုတဲ့ မှဲ့ ၊ စံပယ်တင်(ညာဘက်) မှဲ့ရယ်ဆိုပြီး အမျိုးသမီးတွေအတွက် အထင်ကရ မှဲ့ (၇)မျိုးရှိတယ်။ ၁-ရတနာရွှေအိုးမှဲ့ အဲဒီမှာ ရင်ဘတ်အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား မှဲ့တစ်လုံးတည်း ထင်းထင်းကြီး ရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမှဲ့ကို ၇တနာရွှေအိုးလို့ […]
ဒီသတငျးမြိုးမတငျခွငျသျောလညျးသမီးရှငျမြားမိမိ၏ သမီးမြားအတှကျ ဂရုစိုကျစခွေငျတဲ့ စတေနာလေးနဲ့ပါ..
February 26, 2020 February 26, 2020 MM Live News
ထိုသတင်းမျိုးမတင်​ခြင်​​သော်​လည်း သမီးရှင်​များမိမိ၏ သမီးများကို ငယ်​ငယ်​ကြီးကြီး ကြပ်​ကြပ်​မတ်​မတ်​ ဂရုစိုက်​​စေခြင်​တဲ့​ စေတနာ​လေးနဲ့ပါ….။ ( တရားခံပုံကိုမျက်​နှာမပိတ်​တာ​လေးကိုခွင့်​လွှတ်​ပါ ……) ၂၄၊၂၊၂၀ ရက်​​နေ့ ည​နေ၅း၃၀အချိန်​ခန့်​က ဗန်း​မောက်​မြို့နယ်​၊သရက်​ကုန်း​ကျေးရွာ​နေ….. အသက်​၂၃နှစ်​အရွယ်​ ​အောက်​ပါပုဂ္ဂိုလ်​က တစ်​ရွာတည်း​နေ အသက်​၆နှစ်​အရွယ် ​အမျိုးသမီးငယ်​အား အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ​ပြုကျင့်​သဖြင့်​…. ဗန်း​မောက်​မြို့မရဲစခန်းမှ ဖမ်းမိထားတဲ့ ကနဦး သတင်း​လေးပါ…..။#လူအောင် unicode ဒီသတငျးမြိုးမတငျခွငျသျောလညျးသမီးရှငျမြားမိမိ၏ သမီးမြားအတှကျ ဂရုစိုကျစခွေငျတဲ့ စတေနာလေးနဲ့ပါ…. ထိုသတငျးမြိုးမတငျခွငျသျောလညျး သမီးရှငျမြားမိမိ၏ သမီးမြားကို ငယျငယျကွီးကွီး ကွပျကွပျမတျမတျ ဂရုစိုကျစခွေငျတဲ့ စတေနာလေးနဲ့ပါ….။ ( တရားခံပုံကိုမကျြနှာမပိတျတာလေးကိုခှငျ့လှတျပါ ……) ၂၄၊၂၊၂၀ ရကျနေ့ ညနေ၅း၃၀အခြိနျခနျ့က ဗနျးမောကျမွို့နယျ၊သရကျကုနျးကြေးရှာနေ….. အသကျ၂၃နှဈအရှယျ အောကျပါပုဂ်ဂိုလျက တဈရှာတညျးနေ အသကျ၆နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးငယျအား အလိုမတူပဲ သားမယားအဖွဈ ပွုကငျြ့သဖွငျ့…. ဗနျးမောကျမွို့မရဲစခနျးမှ ဖမျးမိထားတဲ့ […]